Habakoka 2 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
2 Hitsangana foana eo amin’ny toeram-piambenako aho,+ ary hijoro hatrany eo ambony manda. Hiambina foana aho+ mba ho hitako izay holazainy amiko+ sy izay havaliko rehefa hananatra ahy izy.+ 2 Dia hoy i Jehovah tamiko: “Soraty ny fahitana, sady ataovy mazava tsara eo amin’ny takelaka fanoratana,+ mba hisosa tsara ny vakitenin’izay mamaky azy mafy.+ 3 Fa mbola ho amin’ny fotoana voatondro vao ho tanteraka ilay fahitana,+ sady mihazakazaka mafy ho amin’ny farany ka tsy handainga. Ary na dia ela fiavy aza izany, dia andraso ihany, fa tsy maintsy ho tanteraka.+ Tsy ho tara izany. 4 “Misy olona mirehareha+ sady tsy mba manao izay mahitsy, fa ny olo-marina kosa ho velona noho ny tsy fivadihany.+ 5 Mamitaka ny divay+ ka vao mainka mizahozaho+ ny lehilahy tomady. Ary tsy hahatratra ny zava-kendreny izy,+ na dia ataony lehibe toy ny Fasana* aza ny faniriany. Toy ny fahafatesana izy, ka tsy mety afa-po.+ Ary angoniny ho ao aminy foana ny firenena rehetra. Voriny ho ao aminy koa ny vahoaka rehetra.+ 6 Tsy izy rehetra ireny anefa ve no hanao teny fanarabiana+ sy haneso azy, eny, hiresaka azy an-kolaka? Dia hisy hiteny hoe: “‘Lozan’ilay mangorona an’izay tsy azy!+ Mandra-pahoviana?+ Eny, lozan’ilay mivesatra trosa! 7 Tsy hitsangana tampoka ve ireo mitaky zanabola aminao, ary tsy hifoha ve ireo manozongozona mafy anao, ka handroba anao?+ 8 Nandroba firenena maro ianao, ka horobain’ny vahoaka sisa rehetra,+ satria nandatsaka ran’olombelona, sady nanao herisetra tamin’ny tany sy ny tanàna ary izay rehetra monina ao.+ 9 “‘Lozan’ilay manao ny tsy rariny hahazoana tombony ho an’ny ankohonany,+ mba hanorenany ny akaniny eny amin’ny avo mba tsy ho azon’ny loza!+ 10 Namorona tetika nanala baraka an’ireo taranakao ianao, dia ny handringanana firenena maro.+ Ary manota ianao.+ 11 Eo amin’ny rindrina dia hisy vato hitaraina, ary eo amin’ny tafo kosa hisy vatan-kazo hamaly azy.+ 12 “‘Lozan’ilay manorina tanàna amin’ny fandatsahan-dra sy manangana vohitra amin’ny tsy fahamarinana!+ 13 Tsy i Jehovah Tompon’ny tafika ve no mahatonga ny olona hiasa mafy, nefa ho levon’ny afo fotsiny izany? Ary tsy izy ve no mahatonga ireo firenena hisasatra, nefa zava-poana fotsiny izany?+ 14 Fa ny tany ho feno fahalalana ny voninahitr’i Jehovah, tahaka ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina.+ 15 “‘Lozan’ilay manome zava-pisotro hahamamo ny namany,+ mba hijereny ny fitanjahany.+ Ampiarahiny amin’ny fahatezerany sy ny fahavinirany izany zava-pisotro izany. 16 Ho tototry ny fahafaham-baraka ianao, fa tsy voninahitra.+ Mba misotroa koa ianao,+ ary aoka hoheverina ho tsy mifora.+ Hampisotroin’i Jehovah an’izay ao anatin’ny kaopy eny an-tanany ankavanana koa ianao,+ ary ho feno fahafaham-baraka ny voninahitrao. 17 Fa hivaly aminao ny herisetra nataonao tamin’i Libanona+ sy ny nandripahanao ny bibidia, izay efa nihorohoro mihitsy. Nandatsaka ran’olombelona mantsy ianao, sady nanao herisetra tamin’ny tany+ sy ny tanàna ary izay rehetra monina ao.+ 18 Inona no soa entin’ny sary sokitra+ nefa ilay namorona azy ihany no nanao sokitra azy? Ary inona no soa entin’ny sarivongana metaly sy ny mpampianatra lainga+ nefa ilay namorona azy ihany no natoky azy,+ ka nanao andriamanitra tsy misy dikany sady moana?+ 19 “‘Lozan’ilay miteny amin’ny hazo hoe: “Mifohaza!”, ary amin’ny vato moana hoe: “Mifohaza! Hampianatra izy”!+ Voarakotra takela-bolamena sy takela-bolafotsy izy,+ ary tsy misy fofonaina mihitsy ao anatiny.+ 20 Ao amin’ny tempoliny masina anefa i Jehovah.+ Aoka hangina eo anatrehany ianao, ry tany manontolo!’”+